जुन रुख रोपियो, त्यहि रुखले लियो अध्यक्ष बोगटीको ज्यान (भिडियो सहित)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
जुन रुख रोपियो, त्यहि रुखले लियो अध्यक्ष बोगटीको ज्यान (भिडियो सहित)
समीर बलामी/फिल्मी फण्डा । मंगलवार दिउँसोको ११ः२८ बजेको थियो । नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष राम केशर बोगटी एक कार्यक्रममा पुगेर ललितपुर टिकाथली स्थित घर फर्केका थिए । घर पुगेर आफुले लगाएको लुगा परिवर्तन गरि औपचारिक ड्रेसमै उनी अर्को कार्यक्रमको लागि तयारी गर्दै बाहिर निस्किए । घर नजिकै मन्दिर छ । मन्दिरकै छेऊमा खोलाको किनार र सँगै पिपलको तीन वटा रुख छ । ४ बर्ष अघि अध्यक्ष राम केशर बोगटीले वृक्षारोपण गरेका थिए ती पिपलको बोटहरु ।
४ बर्षमा हल्लकै बढेको पिपलको बोटले करेन्टको तारलाई असर गर्ने भएपछि उक्त रुख काट्न विहानै साथीभाईसँग सल्लाह गरि मान्छे लगाईएको थियो । पिपलको रुख बेचेर आएको पैसा मन्दिर संरक्षणको लागि दिने सल्लाह भएको थियो । खोलाको किनारमै रुख रहेकोले खोलाबाट रुखलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै संभावना थिएन । त्यसैले रुख काट्दा विजुलीको तारमा झर्ने संभावना भएकोले अधयक्ष बोगटीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फोन गरि विजुली केही समयको लागि बन्द गराईएको थियो ।
कार्यक्रम जान केही समय बाँकी हुदै गर्दा आफ्ले काट्न लगाईएको रुख काटेको हेरर जाऊ न भनेर उनले आफ्नो गाडीलाई नजिकै सडकको छेऊमा पार्किङ गरे । रुख भन्दा करिब २० मिटर पर उभिएर उनले हेरिरहेका थिए । एकोहोर रुखतिर हेरिरहँदा एउटा रुख खोला तिर लडिसकेको थियो । अन्दाजी मध्यान्हको १२ बजेर १३ मिनेट गएको थियो । अर्को रुख एक्कासी विजुलीको तारमा पर्यो । ट्रान्समिटर सहितको दुईटा सिमेन्टको पोल थियो । रुख तारमा पर्नेबितिकै पोल बाँचियो । अध्यक्ष बोगटी हलचल गर्न समेत पाएनन् । बाँचिएको पोल सहितको ट्रान्समिटर बोगटीको टाउकोमा बजारियो । पोलले पेटमा थिचियो ।
न त भाग्न सके बोगटी, न त ऐया भन्न पाए, एक्कासी टाउको क्षतविक्षत भयो । पेटको दुई ठाउँमा चिरियो । सबै जना मान्छेहरु जम्मा भए । प्रहरी आईपुग्यो । प्रहरीकै भ्यानमा उनलाई हतार हतार ललितपुर ग्वार्कोस्थित बि एण्ड बि हस्पिटलमा पुर्याइयो। तर उनलाई बचाउन सकिएन । घटना स्थलमै उनले संसार छाडिसकेका थिए । तर घटनास्थलमा रुवावासी र प्रत्यक्ष घटना देखिरहँदा दिमागले केही सोच्न सकिएन र १२ बजेर २८ मिनेटमा हस्पिटल ल्याइपुर्याएका थियौं । बि एण्ड बि हस्पिटलको आकस्मिक कक्षमा डक्टरहरुले उनलाई चेकअप गर्दैगर्दा खेरी उनको ज्यान गईसकेको थियो । फिल्मी फण्डासँग भावुक हुदै अध्यक्ष बोगटीका छिमेकी प्रत्यक्षदर्शी काजी थापाले सुनाए ।
४ बर्ष अघि मन्दिर वरपर रुख रोप्नुपर्छ भन्दै बोगटी आफैले रोपेका थिए पिपलको बोटहरु । चार बर्ष पछि पिपलको बोट बढेर विजुलीको तारलाई असर गर्ने भएपछि रुख काट्न विहानैदेखी योजना बनाएका थिए बोगटीले । आफैले मान्छे खोजेर रुख काट्न लगाईएका थिए उनले । सहयोगको लागि मलार्ई पनि भनेका थिए उनले । तर जुन रुख उनले रोपे त्यहि रुखले उनको ज्यान लिन्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन । नसोचेको घटना घट्यो –काजी थापाले थप कुरा सुनाए ।
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीसँगको कुराकानी :
को हुन् राम केशर बोगटी ?
नेपाल चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा झण्डै २ बर्ष अघि निर्वाचित भएका राम केशर बोगटी पेशाले कलाकर्मी हुन् । विगत २ दशकदेखी फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय हुदै आएका उनी दर्शकहरुमा भन्दा चलचित्रकर्मीहरुमा चर्चित छन् । दर्जनौं टेलिफिल्म र फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेका उनले एक दशक सम्म टिकाथली स्थित आफ्नै निवासमा बोगटी सुटिङ स्टुडियो संचालन गरेका थिए । केही बर्ष यतादेखी उनले स्टुडियो बन्द गरेका हुन् । कलाकार संघलाई नयाँ उचाईमा लाने र कलाकार संघको आफ्नै भवन बनाउने एजेण्डालाई अघि सारेर कलाकार संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए उनी । उनको परिवारमा दुई छोरा दुई छोरी र दुई श्रीमति रहेका छन् । बोगटीको एक छोरी अष्ट्रेलिया र एक छोरा अमेरिकामा छन् । बाँकी परिवारसँगै नेपालमै रहेका छन् ।
बोगटीको दाहसंस्कारको प्रक्रिया
राम केशर बोगटीको असमायिक निधन भइसकेपछि बि एण्ड बि हस्पिटलबाट पोष्ट मार्टमको लागि पाटन हस्पिटल लगिएको छ । प्रहरीले घटना स्थलमा गएर मुचुल्का उठाउने र रिपोर्ट तयार पार्ने काम गरिसकेपछि पाटन हस्पिटलले पोष्ट मार्टम गरिनेछ । त्यसपछि परिवारले विदेशमा भएका छोरा र छोरीलाई कुर्ने अवस्थामा बोगटीको पार्थिव शरिरलाई काठमाडौं स्थित टिचिङ हस्पिटलमा राख्ने बुझिएको छ । विदेशबाट छोरा र छोरी आईसकेपछि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि पशुपति आर्यघाटमा राख्ने र अन्तिम दाहसंस्कार गरिने पारिवारीक स्रोतले जनाएको छ । यदि विदेशमा रहेको छोरा र छोरीलाई नकुर्ने अवस्थामा आजै पशुपति आर्यघाटमा लगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र दाहसंस्कार गर्ने पनि स्रोतले बताईएको छ ।
कलाकार संघको आकस्मिक बैठक पाटन हस्पिटलमा
नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष राम केशर बोगटीको असमायिक निधन पछि पाटन हस्पिटलमा जम्मा भएका कलाकार संघका अन्य पदाधिकारीहरुको आकस्मिक बैठक पाटन हस्पिटलमा बसेको छ । बैठकले बोगटीको असमायिक निधनप्रति दुख व्यक्त गरेको छ । अध्यक्षको पार्थिव शरिरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि परिवारसँग सहकार्य गरि औपचारिक कार्यक्रम तयारी गर्ने महासचिव सरीता लामिछानेले बताएकी छिन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निर्माण कार्य भईरहेकोले श्रद्धाञ्जलीको लागि पशुपति आर्यघाटमै राखिने संघले जनाएको छ । तर अन्तिम श्रद्धाञ्जली कहिले हुने भन्ने वारे परिवारसँग सहकार्य गरिरहेको पनि महासचिव सरीता लामिछानेले बताएकी छिन् ।
यसमा तपाइँको प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुष्पको ‘कृष्ण लीला’ नयाँ वर्षमा
बलिउड नायिका करिना कपुर दोश्रो पटक आमा बन्ने तयारी
नेपालकी अञ्जली लामा हलिउड फिल्ममा डेब्यू गर्दै
घान्द्रुकमा फिल्म र पर्यटनका कुरा
प्रदीप खड्काको नयाँ हिरोईन रेनु
हमालको ‘थिमेट्रीकल स्केच फोटो’ सहित ‘सत्यम’को अडिशन कल
फिल्म ‘कसिङ्गर’ युट्युबमा सार्वजनिक
वियोगको कथा बोल्ने ‘मैले के बिगारे’ सार्वजनिक (भिडियो)
‘कलेज लभ’ को ट्रेलर सार्वजनीक (भिडियो)
पुष्प र गीता फिचर्ड ‘दिइसके यो जिवन’ (भिडियो)
प्रबन्ध निर्देशक : कबिता बलामी
सम्पादक : समीर बलामी
कार्यकारी सम्पादक : महेश्वर तामाङ
डेस्क : दिपेन्द्र अधिकारी
संवाददाता : देविका घिमिरे/अर्पण नेपाल
फोटो/भिडियो : सञ्चु थोकर लामा
कानुनी सल्लाहकार : अधिवक्ता ध्रुव मानन्धर
वेब डिजाईन :इनोव्हेटिभ वेब डिजाइन
Balami Film Entertainment Pvt. Ltd. Balaju-16, Kathmandu
Online Office : Anamnagar, Kathmandu
01-4420813 / 9851162384 Mail: filmyfandatv@gmail.com
Copyright © 2017-2020 Balami Film Entertainment Pvt. Ltd. All Rights Reserved. | सूचना बिभाग दर्ता नम्बर: 465 / 073